ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Meningococcal vaccine)ဆိုသည်မှာ နစ်စီရီယား မန်နင်ဂျစ်တိုင်ဒစ်စ် Neisseria meningitidis (English)ဟုခေါ်သော ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်သောကူးစက်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတိုင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကာကွယ်ဆေးအမျိုးပေါင်းများစွာရှိပြီး အေ၊ စီ၊ ဒဗလျူ ၁၃၅ နှင့် ဝိုင် စသောပိုးအမျိုးအစားများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးများသည် (၈၅-၁၀ဝ)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ကြာသည်အထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးကို ကျယ်ပြန့်စွာ ထိုးပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါနှင့် ပိုးမွှားများတကိုယ်လုံးတွင်ပျံ့နှံ့ကာ သွေးဆိပ်တက်ခြင်း(sepsis)တို့ဖြစ်ပွားမှုများ ကျဆင်းသွားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကြွက်သား သို့မဟုတ် အရေပြားအတွင်းသို့ ထိုးနှံရသည်။
ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း အသင့်အတင့် သို့မဟုတ် မြင့်မားသော သို့မဟုတ် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသောနိုင်ငံများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို ပုံမှန်ထိုးပေးသင့်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနိုင်ငံများတွင်တော့ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများကိုသာ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသင့်သည်။ အာဖရိကန် ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ခါးပတ်ဒေသ(African meningitis belt)ဟုခေါ်သော အာဖရိကတိုက် ဆာဟာရတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် ရောဂါပိုး၏ပဋိဇာတ်နှင့် သယ်ဆောင်ပေးသောပရိုတိန်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသောကွန်ဂျုဂိတ်ကာကွယ်ဆေး(conjugate vaccine)ဖြင့် အသက်(၁)နှစ်မှ (၃၀)နှစ်အတွင်း လူများအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလျက်ရှိသည်။ ကနေဒါနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ မန်နင်ဂိုကောကပ် ဘက်တီးရီးယား(၄)မျိုးလုံးကို ကာကွယ်နိုင်သည့် ကာကွယ်ဆေးကို ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များနှင့် ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများအားလုံးကို ပုံမှန်ထိုးရန် အကြံပြုထားသည်။ မက္ကာမြို့သို့ ဟာ့ဂ်ျခရီးစဉ်အတွက်သွားမည့် ခရီးသည်များအားလုံးသည် ဤကာကွယ်ဆေးထိုးရန် လိုအပ်သည်။
ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်ပြီး တချို့လူများ၌ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းနှင့် နီရဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူပေါင်းတစ်သန်းတွင် တစ်ယောက်ခန့်သည် ပြင်းထန်သည့် ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တတ်သည်။
ပထမဆုံး ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၇၀) နှစ်ပိုင်းတွင် စတင်ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ် လက်ကားဈေးမှာ (၃.၂၃-၁၀.၇၇)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဆေးပတ်လည်အောင်ထိုးရန် (၁၀ဝ-၂၀ဝ)ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၈ "Meningococcal vaccines: WHO position paper" (Nov 2011). Weekly epidemiological record 47 (86): 521–540. PMID 22128384.
↑ "Polysaccharide vaccines for preventing serogroup A meningococcal meningitis." (25 January 2005). The Cochrane database of systematic reviews (1): CD001093. PMID 15674874.
↑ "Conjugate vaccines for preventing meningococcal C meningitis and septicaemia." (19 July 2006). The Cochrane database of systematic reviews (3): CD001834. PMID 16855979.
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ "Meningococcal A conjugate vaccine: updated guidance, February 2015." (20 Feb 2015). Weekly epidemiological record 8 (90): 57–68. PMID 25702330.
↑ Barrett၊ Alan D.T. (2015)။ Vaccinology : an essential guide။ p. 168။ ISBN 9780470656167။
↑ Vaccine, Meningococcal။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=289688" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၃:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။